Aya ndiwo akanakisa magiraidhi makadhi emitambo muna 2022
February 25, 2022 by Martin6
Kadhi yemifananidzo ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvePC yemitambo, kana isiri iyo yakanyanya. Asi kungofanana nezvakawanda zvePC, hapana GPU imwechete inoshanda kune wese munhu. Nepo vamwe vashandisi vangangoda iyo yakanyanya kunaka GPU yeyekupedzisira mutambo wemitambo paPC, vamwe vangangoda chimwe chinhu chinopa kukosha kwakanyanya, kunyangwe isina simba. Vazhinji vari kutotsvaga akanakisa bhajeti makadhi emifananidzo yeakajairika 1080p mutambo wemitambo. Zvakanaka muchinyorwa chino, tichatarisa mamwe emhando yepamusoro makadhi emitambo aunogona kutenga muna 2022. Tichaedza kuwedzera sarudzo dzakawanda sezvatingagona mumhando dzakasiyana dzemitengo, saka pane chimwe chinhu munhu wose.
Isu tinonyatsoziva mamiriro azvino mumusika weGPU uye kuoma kwazvakaita kutenga chero makadhi emifananidzo - tisiye iwo epamusoro-tier - pasina kubhadhara mari isinganzwisisike. Hatisati tabuda muhuni asi zvinoita sekunge mitengo yeNvidia ne AMD GPU inogona kupedzisira ichidzika. Takatoona mamwe masheya achibuda pazvitoro, zvichibvumira vanhu vazhinji kuti vazopedzisira vatenga kadhi yemifananidzo muna 2022. Mamiriro ezvinhu anotarisirwa kuve nani mumwedzi mishoma inotevera. Uye kana izvo zvikaitika, isu tinofunga kuti aya ndiwo emhando yepamusoro makadhi emitambo aunofanirwa kufunga nezvekutenga.
Yakanakisa yakazara magiraidhi kadhi yemitambo muna 2022: Nvidia GeForce RTX 3080
Nepo iyo GeForce RTX 3080 inogona kunge isiri iyo ine simba kwazvo kadhi yemifananidzo pamusika izvozvi, zvirokwazvo ndiyo kirimu yechirimwa. Iyo RTX 3080 iGPU yakanaka kwazvo muRTX 30-series lineup iyo inokwanisa zvakakwana kubata 4K mutambo we60FPS uye pamusoro. Iyo RTX 3080 yakazviitawo kune zvimwe zvakawanda zvezvimwe zvinyorwa zvekuunganidza, zvinosanganisira akanakisa makadhi emifananidzo uye akanakisa Nvidia makadhi emifananidzo, saka hazvishamisi kuti isu tawedzera izvi seyedu yepamusoro sarudzo yemitambo.
Iyo Nvidia GeForce RTX 3080 yemitambo iyo nyowani uye yakagadziridzwa Ampere architecture. Isu tiri kutarisa kuvandudzwa kwekuita kwese kweanopfuura makumi matatu-muzana kana tichienzaniswa neyakare-gen mumwe wake, iyo RTX 30 Ti. Uye chinhu chakanakisisa pamusoro pazvo? Iyo RTX 2080 inodhura inosvika mazana mashanu emadhora zvishoma, saka uri kunyanya kuwana kuita kwakawanda nemutengo wakaderera. Inotoenderana nekuita kwakazara kweRTX 3080 pasina kuda mari yakawanda.
Kutenda kuna Ampere, isu tiri kutarisawo mamwe makuru eNvidia maficha anosanganisira DLSS. DLSS 2.0 inoshandawo zviri nani kuvonga kune yakagadziridzwa tensor cores paRTX 3080. Iyo RTX 3080 inopawo inoshamisa ray-tracing performance kana ichienzaniswa nemakwikwi. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nekuvandudzwa kweDLSS kuita. Nvidia akashanda paDLSS zvakanyanya kuvandudza kukwirisa. Mitambo yacho inotaridzika zvirinani izvozvi uye inopa yakakura kuita inosimudzira, kunyanya kana uri kushanda nepamusoro-resolutions uye RT inopa. Zvakachengeteka kutaura kuti iyo Nvidia RTX 3080 ine ruoko chikara cheRadeon RX 6800 XT kana zvasvika pakuita kweRT. Pachine basa rakawanda rinoda kuitwa kubva kudivi re AMD kana zvasvika kune RT uye kukwira kumusoro, saka isu tinofunga kuti Nvidia acharamba akabata pamusoro kusvika izvo zvaitika.
Kana zviri izvo zvakatsanangurwa, iyo GeForce RTX 3080 inotakura 28.3 bhiriyoni transistors pamwe ne272 Tensor cores uye 68 RT cores. Tiri kutarisa wachi inosimudzira ye1,710MHz, iri zvishoma zvishoma pane ese ari maviri RTX 2080 Super FE uye RTX 2080 FE's boost wachi kumhanya kwe1,815MHz uye 1,800MHz, zvichiteerana. Iyo Nvidia RTX 3080 zvakare ine 10GB VRAM ine 19GB/s kumhanya. Iyo RTX 3080 ine yakazara bandwidth ye720GB/s, iyo yakanyanya kukwirira kupfuura mamwe maviri maGPU ataurwa pamusoro.
Zvese zvinhu zvinotariswa, isu tinofunga iyo GeForce RTX 3080 ndeimwe yeakanakisa makadhi emifananidzo aunogona kutenga ekutamba izvozvi. Iri rinogona kunge riri nhanho pazasi peRTX 3090 asi isu tinofunga kuti iyi ndiyo yakanakisa GPU kune vazhinji vashandisi kunze uko. Inopa yakakura 4K mutambo wemitambo ine yakatsetseka gameplay kunyangwe ine mazita anodiwa seCyberpunk 2077. Ingoita shuwa kuti wabatana neimwe zvakanakisa CPUs uye uve zvakanaka 4K yemitambo yekuona kuti uwane yakanakisa mutambo wekutamba. Unogona kutenga iyo Yevakawana 'Edisheni yeRTX 3080 kubva kuNvidia kana kutora rimwe remakadhi akagadzirwa nemumwe weakawanda ehukama OEMs anosanganisira ASUS, MSI, nezvimwe.
Nvidia GeForceRTX 3080
Iyo Nvidia GeForce RTX 3080 inogona kunge isina simba seRTX 3090 pabepa, asi inofanana nekuita kwayo uye isu tinofunga kuti yakawanda kubata mitambo inodakadza kunyangwe pa4K.
Tenga kubva kuBest Buy
Yakanakisa AMD mifananidzo kadhi yemitambo: AMD Radeon RX 6800 XT
Iyo Radeon RX 6800 XT ndeimwe yeakanyanya simba AMD makadhi emifananidzo kusvika parizvino. Iri kumusoro uko pamachati ekuita pamwe neRX 6900 XT uye inokwikwidza neNvidia GeForce RTX 3080 munzvimbo yepamusoro-yekupedzisira. Kungofanana neRTX 3080, iyo RX 6800 XT haisi AMD yepamusoro-ye-iyo-mutsara GPU muRX 6000 yakatevedzana. Nekudaro, isu tinofunga kuti inopa zvakafanana zvakajairika kuita seRX 6900 XT uku ichidhura zvakanyanya mari shoma. Uye ndosaka chiricho chikonzero chedu chekutora makadhi emifananidzo kubva ku AMD muna 2022.
Panyaya yezvakatemerwa, iyo Radeon RX 6800 XT inopinda mumusika ine makumi manomwe neshanu CU uye anosvika mazana mana nemakumi matanhatu nesere GPU cores. Iyi chaiyo GPU ine base wachi ye72MHz nepo ichigona kurova inosimudzira wachi yekumhanya ye4,608MHz. Iyo RX 2,015 XT inotsigirawo Rage modhi umo ese ari maviri ewachi yayo yemutambo uye inosimudzira wachi kumhanya inogona kuwedzerwa mberi. Rage Mode ndeyekuita preset yeRX 2,250 XT inoibvumira kuti ishande nekumhanya kwewachi yepamusoro. Kunze kweizvozvo, wachi inomhanya uye kugona kwepamusoro kunosiyana zvichienderana nedhizaini yese yekadhi zvakare.
Pamusoro pezvo, iyo Radeon RX 6800 XT inouyawo ne16GB GDDR6 ndangariro, iyo yakanyanya kukwirira kupfuura iyo RTX 3080 inounza patafura. Isu tiri kutarisawo 256-bit bhazi rendangariro uye bandwidth ye512GB/s. Iyo, zvisinei inodonha ipfupi mudhipatimendi rekuyeuka bandwidth kana ichienzaniswa neRTX 3080's bandwidth ye760GB/s. Iyo RX 6800 XT yakaverengerwa 300W TGP uye AMD iri kukurudzira 750W PSU kuti imhanye iyi GPU zvakanaka kunze kwezvimwe zvikamu zvePC yako.
Iyo Radeon RX 6800 XT, kana uri kushamisika, inotsigirawo ray-tracing. Kuitwa kweRT kweGPU iyi, zvisinei, hakuna kunaka seRTX 3080. RTX 3080 GPUs dzinoita zviri nani pane zvese nekuda kweDLSS. Asi kana ukaregeredza kuita kweRT, isu tinofunga kuti iyi GPU inoswedera pedyo nekuita kweRTX 3080 GPU. Inopa yakanaka 4K mutambo wekutamba uku ichidhura senge $50 isingasviki iyo RTX 3080 pakutengesa. Iyi GPU zvakare ine yakawanda VRAM kupfuura iyo RTX 3080, saka izvo zvakafanira kufungawo.
Isu tinoda kuona kumwe kuvandudzwa pa AMD's upscaling tekinoroji kukwikwidza neNvidia's DLSS tech. Kunyange zvazvo FSR yave kuenderana nemitambo yakawanda, isu tinofunga kuti kuchine rimwe basa rakawanda rinofanira kuitwa mudhipatimendi remhando yepamusoro. AMD zvakare ine iyo RX 6900 XT, iyo inokurumidza GPU muzvikamu mazana matanhatu. Asi iyo RX 6000 XT inokwikwidza yakananga yeRTX 6900 uye isu tinofunga kuti ese ari maviri akawandisa pakutamba uye anofanirwa kunge akabatanidzwa chete nezvikamu zvine simba zvakanyanya kune anofarira-giredhi kuvaka. Isu tinofunga kuti vashandisi vazhinji vachagutsikana zvakakwana neRX 3090 XT ye6800K yemitambo. Muchokwadi, kune zvakare iyo RX 4 XT inofanirwa kuve yakawanda kune vakawanda vatambi kunze uko.
Iyo RX 6800 XT ndiyo yakanakisa kadhi yemifananidzo mu 6000. Yakafanana neRX 6900 XT kunze kwekudzika zvishoma kwewachi kumhanya.
Yakanyanya kukosha yemifananidzo kadhi yemitambo: Nvidia GeForce RTX 3060Ti
Nepo iyo RTX 3060 Ti ingave isina simba seimwe kadhi yemifananidzo muNvidia's 30-series lineup, isu tinofunga inopa toni yekukosha. Inopa izvo zvakafanana nemamwe maGPU munhevedzano, asi inotangira pamadhora mazana matatu nemakumi mapfumbamwe. Kune zvakare RTX 399 ikozvino, asi iyo yakawanda yekupinda-level GPU. Isu tinofunga kuti vashandisi vazhinji vanofanirwa kunge vachitenga iyo RTX 3050 Ti sezvo ichipa iyo yakanyanya kukosha mumakumi matatu-akateedzana. Sezvo sekunge kuri kusarudzwa kwedu kweyakanyanya kukosha GPU mune iyi chaiyo muunganidzwa wemakadhi emifananidzo.
RTX 3060 Ti yakave yakakurumbira zvikuru pakati pevatambi sezvo ichivhara gaka rekuita neRTX 3060 uye chimwe chinhu chine simba rakafanana, taura, RTX 3070. Maererano nezvinotsanangurwa, RTX 3060 Ti inoratidzira GA104 graphics unit ine huwandu hwese. 4,864 CUDA cores. Ndiko kusimuka kwakakosha pamusoro peRTX 2060 Super graphics kadhi, ichiri imwe yeakanakisa kukosha maGPU kutenderera kubva kuNvidia. Muchokwadi, iyo RTX 3060 Ti ine yakawanda CUDA Cores kupfuura iyo RTX 2080 Super GPU, inova ndiyo ine simba kwazvo unit mumakumi maviri-akateedzana.
Iyo RTX 3060 Ti inoratidzira base wachi yekumhanya ye1,415MHz uye inosimudzira wachi yekumhanya ye1,665MHz. Izvo zvakare zvinoenda pasina kutaura kuti aftermarket makadhi kubva kune anofarira eZotac, ASUS, uye nezvimwe, zvakare anotsigira overclocking izvo zvinokutendera iwe kuti uwedzere kuwedzera ruzivo rwese. Iyo RTX 3060 Ti ine 8GB GDDR6 ndangariro ine bandwidth ye448GB/s. Izvi, kana iwe uri kushamisika, ndiyo imwechete yekuyeuka bandwidth seRTX 3070. Isu tinowanawo 38 RT uye 152 Tensor cores neRTX 3060 Ti zvinoreva kuti iwe unowana rubatsiro rwe-ray-racing, DLSS, nezvimwe sechiyero. Iyo RTX 3060 Ti yakatemerwa 200W TGP uye inoshandisa 12-pini yekubatanidza.
Kana zvasvika kune chaiyo gameplay kuita, iyo RTX 3060 Ti inokunda pa1080p uye inoburitsa yakanaka yakanaka 1440p yemitambo chiitiko. Iyi chaiyo GPU inokwanisawo kubata 4K mitambo, kunyangwe iwe uchizofanira kuita zvimwe zvibayiro mumhando yemifananidzo. Isu tinofunga kuti yakanyatsopetwa nepakati-tier kusvika kumusoro-kumagumo CPU senge Ryzen 5 5600X kana iyo Core i5-12600 uye pamusoro kune yakanaka mutambo wekutamba. Tine iyi chaiyo GPU mune akati wandei emitambo kuvaka madhairekitori, uye isu tinofunga kuti yakakura GPU yakazara yemitambo. Muchokwadi, haufanirwe kunge uine nyaya kusundira 60FPS pa1440p mumazita mazhinji emazuva ano pamusika.
Iyo RTX 3060 Ti yakafanana neRTX 3070, iyo yekupedzisira iri nani zvishoma mune dzimwe nguva. 1440p yemitambo, semuenzaniso, iri nani neRTX 3070 uye unosungirwa kuwana, toti, nezve 10-20FPS yakawanda mumitambo. Iyo RTX 3060 Ti, zvisinei, haina kuseri kumashure nekuda kweDLSS. Iwe unogona zvakare kufunga kutenga iyo RTX 3050 kana iwe usinganetseke kugadzirisa yekupinda-chikamu chemitambo chiitiko pa1080p.
Iyo RTX 3060 Ti inogona kubata ese ari maviri 1080p pamwe ne1440p yekutamba zvakanaka kwazvo. Ndiyo yakanyanya kunaka makumi matatu-yakatevedzana GPU kune vanhu vazhinji vanoda chimwe chinhu chiri nani pane RTX 30.
Yakanakisa yekupinda-chikamu chegiraidhi kadhi yemitambo: Nvidia GeForce RTX 3050
2021 rave gore rakaoma kune vavaki vePC uye vatambi nekuda kwekunyanya kuderera kuwanikwa kwemakadhi emifananidzo pamusika. Izvo, zvisinei, hazvina kumisa kana Nvidia kana AMD kubva mukuburitsa maGPU matsva. Ipo AMD yakatangisa GPU nyowani yekupinda-level muchimiro cheRX 6500 XT, Nvidia akatora nhanho yekuzivisa iyo nyowani RTX 3050 desktop yemifananidzo kadhi. Iyo RX 6500 XT iri mudiki diki renzvimbo yakaoma nekuda kwekurongeka kwayo kusingajairiki. Nekudaro, isu tafunga kuwedzera iyo Nvidia RTX 3050 seyakanakisa bhajeti GPU yemitambo muna 2022.
Chimwe chezvinhu zvakanakisa nezveRTX 3050 mitengo yayo. Iyi chaiyo GPU inotengwa pamadhora mazana maviri nemakumi mana nemapfumbamwe chete, ichiita iyo yakachipa makumi matatu-yakatevedzana mifananidzo kadhi. Iyo inodzikira iyo RTX 249 nemadhora makumi masere uye zvakadaro inopa yakanyanya kufanana nhanho yekuita mumitambo yakawanda. Iyo 30 zvirokwazvo ndiyo kadhi yemifananidzo yekutenga kana uchiri kushandisa imwe yekare GTX 3060-yakatevedzana makadhi emifananidzo.
Iyo GeForce RTX 3050 GPU, kana uri kushamisika, yakavakirwa pane iyo kambani Ampere architecture. Izvi zvinoreva kuti inotsigira tekinoroji nyowani senge ray-tracing. Muchokwadi, iyo RTX 3050 GPU inovimbisa kuve inokwanisika yekupinda yeNvidia munyika yeray-tracing uye DLSS. Izvi zvoga zvinoita kuti GeForce RTX 3050 ive kadhi yepamusoro pamusoro pemakore ekare eGPUs kubva kuNvidia's 16-series. Chokwadi iyo RTX 3050's ray-tracing performance ingangove isingafadze sekuwanda kwemamwe maGPU mumakumi matatu-akateedzana, asi isu tinofunga kuwedzerwa kweDLSS rutsigiro chinhu chekutarisira.
Nvidia's DLSS yakavandudzika zvakanyanya mumakore uye isu tinofunga kuti ichaita basa rakakura kutendera maGPU asina simba seRTX 3050 kumhanya mitambo yakawanda zvakanaka. Nezvekutsanangurwa kuri kuita, iyo GeForce RTX 3050 inouya ne2,560 CUDA cores. Iyo ine base wachi ye1.55GHz uye inosimudzira wachi ye1.78GHz. Isu tiri kutarisa zvakare ku8GB yeGDDR6 VRAM yeGPU iyi, iyo yakanyanya kukwirira kupfuura RX 6500 XT's 4GB VRAM. Kuve neVRAM yakawanda zvechokwadi kuchabatsira kumhanya akawanda anodiwa mazita uye funga kuti 8GB VRAM ichabvumira iyi GPU kuti igare yakakosha mumusika kwemakore mazhinji ari kuuya. Iyo RTX 3050 zvakare ine inoshanda yekurangarira wachi ye14Gbps uye yakakura kwazvo komputa simba re9.10TFLOPS.
Panyaya yekuita, isu tinofunga iyo RTX 3050 desktop GPU inomaka iyo inotapira nzvimbo ye1080p yemitambo. Kunyange zvazvo chimwe chinhu chakaita seRTX 3060Ti chichave chakasimba uye chichigonesa 1440p kutamba, tinofunga kuti vatambi vakawanda vanotenga munzvimbo yebhajeti vachawana zvakawanda zvakakosha muRTX 3050. Iyi GPU yakarongerwa 130W TGP uye Nvidia inoti uchaida ingangoita 550W PSU yekumhanyisa iyi kadhi yemifananidzo padivi pezvimwe zvinhu. Izvo zvakakosha kuti titaure kuti iyo RTX 3050 inongowanikwa kubva kune vanobatana OEMs sezvo Nvidia isiri kugadzira Yevakawana Edition yeGPU iyi.
MSI GeForce RTX 3050 GPU
Iyo MSI GeForce RTX 3050 kadhi yemifananidzo inopa kuita kwakavimbika uye isarudzo huru kune vatambi vari kutsvaga kuona 1080p mitambo.
Tenga kubva kuNewegg
Yakanakisa 1440p yemifananidzo kadhi yemitambo: Nvidia GeForce RTX 3070
Iyo Nvidia RTX 3070 inogara inotapira kwazvo pakati peRTX 3060 uye ine simba RTX 3080 kadhi yemifananidzo. Isu tinofunga iyo RTX 3070 ndiyo yaunofanira kutenga kana iwe uchingoitira hanya yakanaka 1440p yemitambo chiitiko. Muchokwadi, iyi chaiyo GPU inonyanya kufarirwa pamusika kupfuura iyo RTX 3080 kunyanya nekuda kwekufarirwa kwaita 1440p mutambo wemitambo izvozvi. 1440p yemitambo ndiyo yakasikwa kusimudzira pamusoro pe1080p uye kune akawanda makuru 1440p. vatambi vemitambo inowanikawo pamusika.
Panyaya yezvakatemwa, iyo Nvidia GeForce RTX 3070 inouya neGA104 GPU uye ine 5,888 CUDA cores. Izvo, kana iwe uri kushamisika, ikusimudzira kwakakosha pamusoro peRTX 2080 Ti sezvo ichingorongedza 4,352 CUDA cores. Iyo RTX 3070 zvakare ine makumi mana nematanhatu RT cores uye 46 Tensor cores, yatinofunga kuti ishoma pane yakanakira. Haisi muiti wehurombo neimwe nzira, asi zvinonetsa kufambirana neiyo ray-yekutsvaga kuita kweRTX 184 Ti yemifananidzo kadhi. Kungoisa zvinhu mumaonero, iyo RTX 2080 Ti inounza akawanda se2080 RT cores patafura, kunyangwe yekutanga-gen RT cores.
Panyaya yekumhanya kwewachi, iyo RTX 3070 ine wachi yekuwedzera ye1,725MHz. Isu tiri kutarisa zvakare ku8GB VRAM, chiri zvakare chimwe chinhu chatinofunga kuti chingave chakawanda. Nepo 8GBB VRAM isingaite sebhodhoro reiyi GPU izvozvi, isu tinofunga kuti inogona kushandisa zvimwe, kunyanya sezvo mitambo mitsva iri kuwedzera kudiwa. Iyo RTX 3050 GPU zvakare ine 8GB VRM, saka zvechokwadi chimwe chinhu chakakosha kunyora. Izvo zviri kutaurwa, hazvisi izvo zvishoma kubva kuRTX 3080's 10GB VRAM kuverenga. Iyo RTX 3070 zvakare ine yakafanana ndangariro bandwidth seRTX 3060 Ti GPU, inova imwe huru GPU inoenderera mberi kubhuroka gaka riri pakati peRTX 3060 neRTX 3070.
Iyo GeForce RTX 3070 yakatemerwa simba re220W uye Nvidia anoti iwe uchada angangoita 650W PSU yeiyi kadhi. Inoshandisa 12-pini yekubatanidza, asi iwe unowana imwechete 8 pini kusvika gumi nemaviri mapini adapta mubhokisi. Kana iri yekutamba kwekutamba, iyo RTX 12 inokwanisa zvakakwana kumhanya mitambo pa3070K resolution. Iyo inonyanya kuenderana ne4p yemitambo asi unogona kugadzirisa mamwe marongero kuti umhanye kunyangwe mamwe mazita anodiwa zvakanyanya anosanganisira Assasin's Creed Valhalla uye Cyberpunk 1440 pa2077K. Kana iri 4p yemitambo, zvakanaka iyo RTX 1440 inofanirwa kukwanisa kumhanya chero mutambo pa3070p pasina nyaya. Uye ndizvo zvinoita kuti zvive zvakakosha kutenga pamusoro pechinhu chakaita seRTX 1440 Ti.
Iyo RTX 3070 GPU zvakare inorova iyo RTX 2080 Ti kana zvasvika pakutamba. Izvo zvinokatyamadza tichifunga kuti iyo RTX 3070 inotengwa sei pamadhora mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe pakutengesa uye iri kuenda kunopesana neiyo inonyanya kudhura uye yepamusoro-tier maGPU kubva kumhuri yeTuring. Nvidia iri kutengesawo iyo RTX 499 Ti yemadhora zana mamwe. Iyo RTX 3070 Ti, zvisinei, inodhura zvakanyanya, kunyanya kana iwe uchida kutamba mitambo pa100p. Uye pamadhora mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe mukutengesa, kunyangwe iyo RTX 3070 inotanga kutaridzika senge sarudzo huru yekufunga nezvayo.
Nvidia GeForce RTX 3070 Vakatanga Edition
Iyo RTX 3070 GPU yakanakira chero munhu ari kuchinja kubva ku1080p kuenda ku1440p yemitambo.
Imwe sarudzo yakanakisa ye1440p yemitambo: AMD Radeon RX 6700 XTTenga kubva kuBest Buy
Nvidia's GeForce RTX 3070 isarudzo yedu yeakanakisa mifananidzo kadhi ye1440p yemitambo. Asi kana iwe uri gehena pakutenga AMD GPU kune yako yemitambo rig uye iwe uchida kuona yakatsetseka 1440p yemitambo, saka isu tinofunga iwe unofanirwa kutenga iyo AMD Radeon RX 6700 XT yemifananidzo kadhi. Pane zvakawanda zvekufarira nezve iyi chaiyo giraidhi kadhi kubva kuimba ye AMD uye ndiyo yedu yekusarudza yakanakisa yakazara yakazara 1440p GPU yemitambo muna 2022.
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza nezve AMD Radeon RX 6700 XT ndechekuti inopa iyo yepamusoro yepamutemo GPU wachi mu AMD 6000 yakatevedzana GPU mutsara. Iyo Radeon RX 6700 XT, kana uri kushamisika, ine wachi yemitambo ye2,424MHz uye yakanyanya kuwedzera wachi yekumhanya ye2,581MHz. Idzi ndidzo nhamba dzinokatyamadza, kunyanya kana iwe uchifunga nezve chokwadi chekuti tiri kutaura nezve mareferenzi maGPU, kwete iwo makadhi emubatanidzwa ane akaomesesa heatsink dhizaini. Izvi zvinoreva, nekugadzirisa kwakakodzera, iyo RX 6700 XT inogona kusvika 2.8GHz pasina kupisa.
Iyo AMD Radeon RX 6700 XT zvakare ine 12GB yeVRAM uye 384GB/s ndangariro bandwidth. Iyo memory bandwidth haina kukwira seiyo yeRTX 3070 asi izvo hazvisi kumisa iyo RX 6700 XT kubva kukiya nyanga ne3070 mune chaiyo-yenyika mutambo wekuita. Iri kadhi remifananidzo rinogona kubata zviri nyore 1440p mutambo, zvichiita kuti ive yakakodzera kune vakawanda vatambi muna 2022. 1440p mutambo wemitambo, sezvatakambotaura, kufambira mberi kwechisikigo kune vakawanda vatambi zvino uye iyi GPU yakakwana kune avo vashandisi vari. kutarisa kuita shanduko kubva ku1080p yemitambo.
Uye kune avo iwe unoda kuziva, iyo RX 6700 XT inokwanisa zvakare kubata 4K yemitambo chero iwe uchigadzirisa mamwe magiraidhi marongero. Zvekare, kuita kwese kwakafanana nekweRTX 3070 GPU, saka hazvishamise pano ne4K yemitambo. Iyo ray-yekutsvaga kuita ndiko uko iyo RX 6700 XT inowira kuseri kweiyo Nvidia mumwe wake. Iri chairo kadhi remifananidzo rine makumi mana "ray-accelerators", izvo zvisina kukwana kuburitsa inonakidza RT mutambo wemitambo. Zvekureva, iyo RX 40 XT uye iyo RX 6900 XT ine makumi masere uye makumi manomwe nenomwe ray accelerators, zvichiteerana.
Asi akawanda emapako aya anotanga kuita seasina kutsamwisa kana ukatarisa mutengo wemadhora mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe eiyi GPU pakutengesa. Ndiwo mutengo wakanaka we479p graphics kadhi, saka isu tinofunga kuti zvechokwadi chimwe chinhu chekuramba takatarisa. Chokwadi, haungazviwane mustock yemadhora mazana mana nemakumi manomwe nepfumbamwe, asi zvakakodzera kuti urambe wakatarira kuti guruva richatanga riini kugadzikana. Asi kana iwe uchinyanya kunakidza pamitambo yechiitiko pa1440K resolution saka isu tinofunga kuti zvakakodzera kukwira kune chimwe chinhu chine simba seRTX 479 kadhi yemifananidzo. Kune rimwe divi, kana iwe usinganetse nezve 4p kana 3080K yemitambo uye uchingoda kuona 1440p yemitambo, wobva wafunga kutarisa dzimwe sarudzo dzinosanganisira iyo RX 4 XT yemifananidzo kadhi.
Iyo AMD RX 6700 XT ine yakanyanya kumhanya wachi yatakaona paGPU. Izvo zvakare zvakanakira kubata 1440p mutambo wemitambo.
Mhedziso yakanakisa kadhi yemifananidzo yevanofarira mitambo: Nvidia GeForce RTX 3090
Munyika yakanaka, ingave iyo RTX 3080 kana iyo RTX 3080 Ti ingave iyo yakanakisa kadhi yemifananidzo pamusika yatinokurudzira vaverengi vedu kutenga. Asi Nvidia akafunga kugadzira chimwe chinhu chakanyanya kuwanda GPU kune chero mutambi. Ehe, tiri kutaura nezve GeForce RTX 3090 aka iyo "Big Ferocious" kadhi yemifananidzo. Ichokwadi kuti iyo RTX 3090 yakawandisa kune mazhinji maPC gamers, asi isu tinofunga kuti zvakakodzera kutaurwa muunganidzwa uyu kunyanya nekuda kweVRAM yayo.
Iyi kadhi yemifananidzo ine 24GB yeGDDR6X VRAM, iyo kana iwe usingazive, yakanyanya kukwirira kupfuura chero chinhu chiripo pamusika izvozvi. Haisi chete iyi yakanaka yekugadzira mabasa, asi kuve neyakakura kudaro yeVRAM zvakare yakakura kune inodiwa zvakanyanya mazita uye simulators. Microsoft's Flight Simulator, semuenzaniso, inotsenga zviri nyore kuburikidza neVRAM yese kuti ipe chiitiko chakanaka kubva kujongwe kana kubva pachigaro. Ndizvo zvimwe chete nemutambo wakashongedzwa zvakanyanya seSkyrim kana Cities Skylines.
Iyo mitambo yakaita seiya inoita kunyange ine simba rakanyanyisa giraidhi kadhi seRTX 3090 ingangoita. Kana iwe uchifunga kuti PC yako yekutamba ichasangana nechero ipi yezvinhu zvataurwa pamusoro apa, saka ungada kufunga kutenga GeForce RTX 3090. Kana zvisina kudaro, unenge uri nani pakutenga imwe kadhi yemifananidzo.
Nekuda kwekutsanangurwa kweiyo GeForce RTX 3090 kadhi yemifananidzo ine chekuita, inoratidzira iyo whopping 10,496 CUDA cores. Isu tiri kutarisa base wachi ye1.4GHz uye inosimudzira wachi ye1.6GHz. Iyo ine zvakare 82 RT cores, ichiita kuti ive sarudzo huru yekupa ray-yekutsvaga mitambo zvakare. Tichiri kukurukura nezveRTX 3090, isu tinofunga zvakakoshawo kutaura nezve hombe iyi GPU chaizvo. Kunyangwe kadhi rereferenzi rakagadzirwa naNvidia rinoonekwa se "Chonky" kadhi. Iwe unozonyatsoda yakakura-saizi PC kesi kuti ikwane mune imwe yeiyi. Tisingataure, iwe zvakare uchada ine simba PSU yekugonesa iyi kadhi yemifananidzo pamwe chete nezvimwe zvikamu zvePC yako. Iyo RTX 3090 yakatemerwa simba re350W uye Nvidia irikukurudzira ingangoita 850W PSU kuti ienderane.
Izvo zvakakoshawo kutaura kuti iyo yepamusoro-yekupedzisira GPU inoda yakaenzana ine simba CPU kuti zvinhu zvifambe zvakanaka uye zvakatsetseka. Tinokurudzira kuibatanidza neimwe yeiyo akanakisa ekutamba CPUs pamusika weabsolute best performance. Zvese zvinhu zvinotariswa, yakakwira-yekupedzisira anofarira mutambo wePC ine RTX 3090 ichakubhadhara iwe madhora zviuru zvishanu, kunyanya kana iwe uchifunga nezve yazvino musika weGPU. Iyo RTX 5,000 pachayo pakutengesa ichakudzosera iwe kutenderedza $3090, izvo zvinoita kuti ive imwe yeanonyanya kudhura makadhi emifananidzo pamusika. Kunyangwe iri kadhi remifananidzo rinodhura zvakanyanya, iyo RTX 1,500 haisi kuwanikwa pamusika izvozvi, saka unogona kunetseka kuwana imwe mustock.
Nvidia GeForceRTX 3090
Iyo RTX 3090 inogona kunge isiri yedu yekusarudza yakanakisa giraidhi kadhi yemitambo, asi zvirokwazvo ndiyo ine simba zvakanyanya pamusika ine mutengo unodhura tag.
Imwe sarudzo yakanakisa yevanofarira: AMD Radeon RX 6900 XT
AMD's Radeon RX 6900 XT ndiyo yakaenzana neRTX 3090 kadhi yemifananidzo. Iyi chaiyo GPU inomiririra yakanakisa ye AMD's RDNA2 inofanira kupa muna 2022. Kungofanana neGeForce RTX 3090 GPU, zvisinei, iyi inowandisawo kune vakawanda vatambi. Isu tinofunga ruzhinji rwevatambi vari kutsvaga kuvaka PC nyowani yemitambo zvingave nani pane kutenga iyo RX 6700 XT kana iyo RX 6800 XT. Saka sei takawedzera kadhi iri kuunganidzwa uyu, unobvunza? Zvakanaka, izvi ndezveavo vari kudzingirira kuita kwakanakisa kubva kuTimu Red.
Kana zvasvika pakuita chaiko mune ese ari maviri emitambo pamwe nemamwe ekugadzira basa remedu maapplication, iyo Radeon RX 6900 XT inenge 10-12% nekukurumidza kupfuura iyo RX 6800 XT yemifananidzo kadhi. Iko kuwedzera kwekuita, zvisinei, kunouyawo pamubhadharo. Iwe unenge uchibhadhara zvakanyanya kuti uwane mabhenefiti eRX 6900 XT mune anofarira mutambo wemitambo. Saka mubvunzo chaiwo waunofanira kubvunza ndewekuti imarii yaunofanira kupisa? Nekuti vese AMD neNvidia vane matani esarudzo izvo zvinozoita kuti yako yese yemitambo chiitiko ive nani.
Panyaya yezvakatemerwa, iyo AMD Radeon RX 6900 XT inoratidzira Navi 21 GPU uye inouya neanosvika 80CUs. Aya maCU anoumba huwandu hwe5,120 rukova processors, kuwedzera gumi nerimwe-muzana pamusoro peRX 11XT. Chimwe chinhu chinonakidza nezveRX 6800 XT ndechekuti zvakare inokwanisa kutyora iyo 6900GHz core wachi kumhanya pasi pemutoro, izvo zvinokatyamadza. Iyo RX 2 XT zvakare inokwanisa kuchengetedza iyo yakazara simba mashandisiro akadzikira kunyangwe iri spec-inorema giraidhi kadhi.
Iyo Radeon RX 6900 XT, sezvatakambotaura, inouya ne16GB yeGDDR6 VRAM ine 256-bit memory bhazi. Iyi GPU zvakare inotora mukana weiyo 128MB Infinity Cache chimiro kuendesa inoshamisa kuita kwese. Iyo RX 6900 XT inokwanisa zvakakwana kubata mitambo pa4K. Iko ray-tracing performance ye6900 XT idiki diki, asi ndozvanga zvirizvo neakawanda AMD GPUs muunganidzwa uyu. Chokwadi, iwe unozokwanisa kupa ray-yatevedzwa magirafu neiyo RX 6900 XT, kunyangwe pa4K, asi ungangofanira kugadzirisa mamwe marongero.
Iyo Nvidia RX 6900 XT ine hushoma VRM simba rekutumira chinodiwa uye referensi kadhi pachayo inopa gumi nematanhatu-chikamu VRM magetsi ekutumira. Zvese zvinhu zvinotariswa, zvakachengeteka kutaura kuti iyo RX 16 XT inopa yakanakisa AMD yekupa munzvimbo yeGPU izvozvi. Iyo Radeon RX 6900 XT ndiyo yavo mureza GPU uye haisi slouch kana zvasvika pakuunza mhedzisiro yakanaka. Isu tinokurudzira kubatanidza neimwe yeakanakisa AMD CPUs pamusika kune yakakura kuita kwese. Iyi chaiyo GPU haisati yave kuwanikwa pamusika izvozvi, asi unogona kurova chinongedzo pazasi kuti urambe wakatarisa masheya.
AMD Radeon RX 6900 XT GPU
Iyo AMD Radeon RX 6900 XT inomiririra zvakanakisa izvo AMD's RDNA2 architecture inofanirwa kupa. Inoenda musoro-kune-musoro kuNvidia's RTX 3090 GPU uye inopa yakanaka 4K mutambo wemitambo.
Yakanakisa mifananidzo kadhi yemitambo muna 2022: Pfungwa dzekupedzisiraTenga kubva kuBest Buy
Zvakanaka, izvo zvinoputira muunganidzwa wedu wemakadhi emifananidzo akanakisa ekutamba aunogona kutenga muna 2022. Tinofunga kuti vatambi vazhinji vari kutsvaga kuvaka PC yekutamba vanofanira kutora pakati peGeForce RTX 3080 kana Radeon RX 6800 XT. Aya ndiwo mapikicha edu epamusoro emakadhi emifananidzo akanakisa emitambo muna 2022 uye vanogona kubata kunyangwe mitambo mitsva pa4K pasina nyaya. Vatambi vari kutsvaga yakanaka 1440p mutambo wemitambo vanofanirwa kufunga kutenga RTX 3070 nepo ekupinda-chikamu PC gamers vachifanira kutarisa chinhu chisina simba uye chinotengeka senge RTX 3050 itsva. Takawedzera mamwe maGPU ane simba zvakanyanya kumusanganiswa kusanganisira iyo RTX. 3090 asi izvo zvakachengeterwa avo vari kutsvaga mhedziso yakanakisa kuita muzvirongwa zvinoda semasimulator kana mutambo wakashongedzwa zvakanyanya.
Nepo iyi rondedzero yaisanganisira ese AMD pamwe neNvidia makadhi emifananidzo, isu zvakare takatsaurirwa zvinyorwa zvekuunganidza zvemhando mbiri kana uchinyatso kutsvaga maGPU kubva kuChikwata cheGreen kana Chikwata Red. Saka ita chokwadi chekumira nekuunganidza kwedu kwe akanakisa Nvidia mifananidzo yemakadhi uye akanakisa AMD mifananidzo yemakadhi kuti uone dzimwe sarudzo dzakanaka dzekuvaka kwako. Neimwe nzira, kana iwe uri kuvaka PC nyowani uye uchitsvaga zvimwe zvikamu wobva watarisa mamwe edu mamwe maunganidzwa anosanganisira bhodhi remamai rakanyanya, akanakisa CPU anotonhorera, Uye zvakawanda.
The post Aya ndiwo akanakisa magiraidhi makadhi emitambo muna 2022 yakatanga kutanga xda-vatadzi.
MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X & RTX 3080 SUPRIM X Graphics Makadhi Ongororo - Yekutanga Dhizaini & Zvese Zvimwe!
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER & GeForce RTX 2060 SUPER Ongorora - Sangana neKuzodza Kunzorodza
NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB GDDR6 Graphics Kadhi Ongororo FT. MSI Zvombo X & ASUS ROG STRIX
Kutanga Kutanga Svondo rino: NVIDIA's GeForce RTX 3070; 1440p Kubheja Kwe $ 499
Ndeipi GPU yaunofanira kutenga: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti kana RTX 3070?
Mavhidhiyo Akanakisisa Emavhidhiyo emutambo: Q3 2018
NVIDIA GeForce RTX 2080 uye RTX 2080 Ti Review
MSI GeForce RTX 2080 DUKE OC 8 GB Graphics Card Review - $ 829.99 US For Tri-Frozr Cooler Pakugadzira Purogiramu PCB
NVIDIA GeForce RTX 3070 Graphics Kadhi Kuti Uve Nezvakakura Zvakakura Kupa Kuenzaniswa neRTX 3080 & RTX 3090, APAC Retailers Report
Dzazvino AMD hotfix inovandudza mashandiro muPasi